Echiche echiche nke usoro mmepụta Latex glove
Njirimara nke uzo uzo PVC
Enwere ike ịmepụta igwe ahụ n'ụzọ dị mma dịka usoro ọgwụgwọ na ịkpụzi dị iche iche si dị. Usoro a bụ ihe ezi uche dị na ya na usoro ntanetị na-akpaghị aka na-eme ka ngwaahịa ahụ kwụsie ike, mkpuchi mkpuchi bụ otu, ogologo bụ edo, enweghị sag, ọnọdụ okpomọkụ dị n'otu, na mmepụta dị elu. Atụmatụ ndị dị ka mfe demoulding.
Mmepụta akara ike ngwaọrụ
Igwe ọkụ ahụ na-agbaso ụkpụrụ nke ikuku ikuku na-ekpo ọkụ iji mee ka okpomọkụ dị n'ime ya dị ọkụ, na-eji ihe mkpuchi mkpuchi dị elu iji rụọ ọrụ nke ọma iji hụ na ọnọdụ okpomọkụ anaghị efu, si otú a na-emeziwanye arụmọrụ nke igwe ahụ. Igwe ọkụ na-eme ka usoro nchịkwa okpomọkụ na-arụ ọrụ na arụmọrụ na-arụ ọrụ dị elu na-emeziwanye Ezi nke njikwa okpomọkụ, si otú a na-emeziwanye ọnụego nke ngwaahịa.
A na-eji polyvinyl chloride mee gloves PVC site na usoro pụrụ iche. Uwe ndị a na-enweghị anụ ahụ, na-enweghị ntụ ntụ, ọgbọ uzuzu dị ala, obere ion ọdịnaya, na enweghị plasticizer, esters, mmanụ silicone na ihe ndị ọzọ. Ha nwere nguzogide kemịkal siri ike, mgbanwe dị mma na mmetụ, ma dị mma ma dị mma iji eyi. Anti-static arụmọrụ, ike ga-eji na a ájá-free gburugburu ebe obibi.
Nke gara aga: Nitrile glove production line
Osote: Mixed nitrile uwe mmepụta akara
Vkwanyere ntekwasa uwe Machine
Vkwanyere uwe M-Size Production Line
Vkwanyere uwe S-Size Production Line
Vkwanyere echebe uwe Machine